အရှက်တွေ ဟက်တက် ကွဲကုန်ကြပြီ.. (ဘယ်သူတွေ ကွဲကုန်တာလဲ) - TheeSayChin
အရှက်တွေ ဟက်တက် ကွဲကုန်ကြပြီ.. (ဘယ်သူတွေ ကွဲကုန်တာလဲ)
July 11, 2019 Min Yar Zar	0 Comments Up To Date News
နေပြည်တော်သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ၊ ရဲချုပ်အောင်နိုင်သူက၊ “အောင်ကြီးဟာ စီစီတီဗီ မြင်ကွင်းကနေ(၂၈)မိနစ်ပျောက်နေတယ်” “သူ့လက်တွေကိုသူပြန်နမ်းနေတာတွေ့တယ်” “သူ့ဖာသာ (မရိုသေ့စကား) ဂွင်းထုပြီး၊မဖွယ်မရာလုပ်ခဲ့ကြောင်းဝန်ခံ တယ်” “အဲဒီ(၂၈)မိနစ်အတွင်းမှာ၊အဲဒီကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့တစ်ဦးတည်း သောအမျိုးသားဖြစ်တယ်” လို့ ရှင်းခဲ့ပါတယ် … ။ အခုဘီဘီစီကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီစီတီဗီမှတ်တမ်းမှာ တော့စီစီတီဗီမြင်ကွင်းကနေ၊အောင်ကြီးပျောက်နေတာ(၁၂)မိနစ်ပဲရှိ တယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီအချိန်ဟာ၊ ကျောင်းဆင်းချိန်မို့၊ ကလေးတွေကို မိဘတွေ ကလာကြိုနေတဲ့အချိန်မို့၊ အောင်ကြီး ပျောက်နေ တယ်ဆိုတဲ့(အမှန် ကတံခါးပိတ်ထားလို့၊မမြင်ရတာ။ပျောက်တယ်လို့ပြောလို့မရနိုင်ဘူး) (၁၂)မိနစ်မှာလည်း၊ ကလေးတွေဟာ စာသင်ခန်းထဲမှာဆရာမတွေနဲ့ အတူရှိနေတယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် … ။
သူ့လက်သူ နမ်းတယ် ဆိုတာကလည်း၊ ရဲမှူးဆိုသူရဲ့ ကားထဲကို တစုံတခု ဝင်ယူ သို့မဟုတ် ဝင်ထားရင်း၊ နမ်းတာသာ ဖြစ်တယ်။ ဂွင်းထုပြီးမတော် တရော်လုပ်ခဲ့လို့၊ လက်ကို နမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ အောင်နိုင်သူ ပြောခဲ့တဲ့ ပျောက်နေတဲ့ (၂၈) မိနစ်မှာ၊ အောင်ကြီိးတင်မက၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဥမ္မာလှိုင်ရဲ့ ယောက်ျား ရဲမှူးပါ၊ ရောက်လာခဲ့တာ၊ စီစီတီဗီမှာ အထင်အရှားမြင်ရတယ် … ။ အတိုချုပ်ရရင်၊ အောင်နိုင်သူ ရှင်းခဲ့သမျှ အားလုံး သောက်တလွဲတွေချည်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအမှုကို ကမ္ဘာက ဒီထက် ပိုပြီး အာရုံစိုက်လာကြ ဦးမယ်။ ကျွန်တော့် စိတ်ထင်၊ အခု ဘီဘီစီက တင်လိုက်တဲ့ စီစီတီဗီရဲ့ ရှေ့ပိုင်းအချိန် မှတ်တမ်းကို၊ ကျောင်းတက်တဲ့ အချိန်ကနေစပြီး၊ ကြည့်လိုက်ရင်၊တရားခံ အစစ်တောင်ပေါ်လာနိုင်တယ်။ (ဒါလည်းဘီဘီစီက တမင်တစ်ကွက်ချန် ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။)
အောင်နိုင်သူ သောက်ရှက်ဟက်တက်ကွဲပြီ။ စီအိုင်ဒီလည်းကွဲပြီ။ ပြည်ထဲရေးလည်းကွဲပြီ။ အောင်ကြီးဟာ တရားခံ အစစ်အမှန် မဟုတ်တာ၊ ရာနှုံးပြည့်နီးပါး သေချာနေပြီ။ တရားကို နတ်စောင့်တယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်ပါရဲ့။ လောင်မီးကျ လျက် နတ်တို့စက် ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား။ အခုတော့ လူယုတ်မာတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လောင်မီးကျကုန်ပြီ …. ။
မင်းဒင်၏ ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှ ကူးယူဖော်ပြ ပါသည်။ (လေးစားမှုဖြင့် ခရက်ဒစ်)
အရှကျတှေ ဟကျတကျ ကှဲကုနျကွပွီ.. (ဘယျသူတှေ ကှဲကုနျတာလဲ)
နပွေညျတျောသကျငယျမုဒိမျးမှုနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ၊ ရဲခြုပျအောငျနိုငျသူက၊ “အောငျကွီးဟာ စီစီတီဗီ မွငျကှငျးကနေ(၂၈)မိနဈပြောကျနတေယျ” “သူ့လကျတှကေိုသူပွနျနမျးနတောတှတေ့ယျ” “သူ့ဖာသာ (မရိုသစေ့ကား) ဂှငျးထုပွီး၊မဖှယျမရာလုပျခဲ့ကွောငျးဝနျခံ တယျ” “အဲဒီ(၂၈)မိနဈအတှငျးမှာ၊အဲဒီကြောငျးကိုရောကျလာတဲ့တဈဦးတညျး သောအမြိုးသားဖွဈတယျ” လို့ ရှငျးခဲ့ပါတယျ … ။ အခုဘီဘီစီကထုတျပွနျလိုကျတဲ့စီစီတီဗီမှတျတမျးမှာ တော့စီစီတီဗီမွငျကှငျးကနေ၊အောငျကွီးပြောကျနတော(၁၂)မိနဈပဲရှိ တယျ။ ဒါ့အပွငျ အဲဒီအခြိနျဟာ၊ ကြောငျးဆငျးခြိနျမို့၊ ကလေးတှကေို မိဘတှေ ကလာကွိုနတေဲ့အခြိနျမို့၊ အောငျကွီး ပြောကျနေ တယျဆိုတဲ့(အမှနျ ကတံခါးပိတျထားလို့၊မမွငျရတာ။ပြောကျတယျလို့ပွောလို့မရနျိုငျဘူး) (၁၂)မိနဈမှာလညျး၊ ကလေးတှဟော စာသငျခနျးထဲမှာဆရာမတှနေဲ့ အတူရှိနတေယျဆိုတာသခြောပါတယျ … ။
သူ့လကျသူ နမျးတယျ ဆိုတာကလညျး၊ ရဲမှူးဆိုသူရဲ့ ကားထဲကို တစုံတခု ဝငျယူ သို့မဟုတျ ဝငျထားရငျး၊ နမျးတာသာ ဖွဈတယျ။ ဂှငျးထုပွီးမတျော တရျောလုပျခဲ့လို့၊ လကျကို နမျးတာမဟုတျဘူး။ အောငျနိုငျသူ ပွောခဲ့တဲ့ ပြောကျနတေဲ့ (၂၈) မိနဈမှာ၊ အောငျကွီိးတငျမက၊ ကြောငျးအုပျခြုပျရေးမှူး ဥမ်မာလှိုငျရဲ့ ယောကျြား ရဲမှူးပါ၊ ရောကျလာခဲ့တာ၊ စီစီတီဗီမှာ အထငျအရှားမွငျရတယျ … ။ အတိုခြုပျရရငျ၊ အောငျနိုငျသူ ရှငျးခဲ့သမြှ အားလုံး သောကျတလှဲတှခေညျြး ဖွဈနတေယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီအမှုကို ကမ်ဘာက ဒီထကျ ပိုပွီး အာရုံစိုကျလာကွ ဦးမယျ။ ကြှနျတေျာ့ စိတျထငျ၊ အခု ဘီဘီစီက တငျလိုကျတဲ့ စီစီတီဗီရဲ့ ရှပေို့ငျးအခြိနျ မှတျတမျးကို၊ ကြောငျးတကျတဲ့ အခြိနျကနစေပွီး၊ ကွညျ့လိုကျရငျ၊တရားခံ အစဈတောငျပျေါလာနိုငျတယျ။ (ဒါလညျးဘီဘီစီက တမငျတဈကှကျခနျြ ထားတာဖွဈနိုငျတယျ။)
အောငျနိုငျသူ သောကျရှကျဟကျတကျကှဲပွီ။ စီအိုငျဒီလညျးကှဲပွီ။ ပွညျထဲရေးလညျးကှဲပွီ။ အောငျကွီးဟာ တရားခံ အစဈအမှနျ မဟုတျတာ၊ ရာနှုံးပွညျ့နီးပါး သခြောနပွေီ။ တရားကို နတျစောငျ့တယျဆိုတာ ဒါမြိုးထငျပါရဲ့။ လောငျမီးကြ လကျြ နတျတို့စကျ ဆိုကွတယျ မဟုတျလား။ အခုတော့ လူယုတျမာတှေ အစုလိုကျအပွုံလိုကျ လောငျမီးကကြုနျပွီ …. ။
မငျးဒငျ၏ ဖဘေု့တျအကောငျ့မှ ကူးယူဖျောပွ ပါသညျ။ (လေးစားမှုဖွငျ့ ခရကျဒဈ)
← Gym ကစားရင်း သေးသွယ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှကို ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ ဟန်​နာယူရီ
ခွေးရှာပုံတော်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ LA Rapper နဲ့ လိမ်ညာသူ စတားရစ်ခ်ျ →
Breaking News နေပြည်တော် သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုမှ ကျူးလွန်သူ တရားခံ ထွက်ပေါ်လာ ….. ။
July 4, 2019 Min Yar Zar 0
BREAKING NEWS သားအရင်းဖြစ်သူက မိခင်အားသတ်မှု ဘားအံမြို့တွင်ဖြစ်ပွား
June 22, 2019 Min Yar Zar 0
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယား အတွက် SHARE ခြင်းဖြင့် စည်းလုံးညီညွှတ်စွာအင်အားပြကြစို့
July 1, 2019 Min Yar Zar 0
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် Pexels/ Andre Furtado မိုးကြိုးမှာ စွမ်းအင် (၃၀၀) ကီလိုဗော့လ်တ်နဲ့အထက် ပါရှိပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို (၅၀,၀၀၀) ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ အပူပြန့်စေနိုင်ပါတယ်။ အပူချိန်(၅) သောင်းဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆိုတာ နေမျက်နှာပြင်ထက် (၅)ဆလောက် ပိုပူပြင်းပါတယ်။